Showing posts sorted by relevance for query အင်္ဂလိပ်စကား. Sort by date Show all posts
3/28/2014 09:47:00 AM articles
4/05/2014 08:02:00 PM Myanmar-news singapore-news
3/25/2014 01:23:00 PM Myanmar-news
6/17/2014 04:17:00 PM strange-news
မာဂရက်က ပီတာဟာ သူမနဲ့ ဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်ပုံရှိပြီး သူမရဲ့ ဒူး၊ ခြေထောက်နဲ့လက်တွေကို ပွတ်သပ်မှုပြု လုပ်တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ပီတာဟာ သိပ်မကြမ်းတမ်းလာသရွေ့ သူမအတွက် သက်သောင့်သက်သာရှိဆဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မာဂရက်က ဆိုပါတယ်။ မာဂရက်ဟာ ပီ တာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြား ပေးဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ရပြီး သုတေသနပြုလုပ် မှုဟာ အဆုံးသတ်မှာတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ ဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ လင်းပိုင် များဟာ LSD စမ်းသပ်မှုနဲ့ ဆေးဝါးတလွဲ အသုံးပြုခံရမှု ကောလာဟလသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး မာ ဂရက်နဲ့ လင်းပိုင်ပီတာတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက မြင်တဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားစေချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး Ms.Mona E Strassburger
5/21/2014 10:37:00 AM Myanmar-news
၁၉၉၈ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတစ်ဦးအနေနဲ့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး Ms.Mona E Strassburger ဟာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုြ
2/12/2014 07:39:00 PM articles malaysia-news
လွယ်လွန်းလို့ နှင့်အခြား ဟာသများ
12/18/2013 09:35:00 AM funny
12/17/2013 05:57:00 PM learn-english
ဒီနေ့လည်း အသုံးတည့်နိုင်လောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ၀ါကျအတိုလေးတွေကို ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) Say which?
(2) What's the haps?
(3) Not on your life!
(4) Please,be seated!
(5) It's encouraging to hear that!
(6) Those were the days!
(7) Said it!
(8) The location isn'tafactor.
နေရာက အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။
(9) No comment!
(10) Two cakes to go!
(11) That's big of you!
(12) You always take her side!
မင်းက သူ့ဖက် အမြဲလိုက်တယ်။
(13) Go soak yourself!
(14) That will never do!
(15) You could have fooled me!
ယုံဖို့ ခက်သားပဲ။ ။
အသုံးများတဲ့..စကားအတိုလေးများ - Short Conversations In Use
12/13/2013 05:25:00 PM learn-english
ဒီနေ့လည်း အသုံးတည့်နိုင်လောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား ၀ါကျအတိုလေးတွေ ကို ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) Let's go Dutch!
(2) Notadicky bird!
(3) Stand easy!
(4) Don't get flustered!
(5) Notahope!!!
(Some hope! လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။)
(6) More fool you!
(7) It's just not my day!
ဒီနေ့ကတော့ ငါ့အတွက် ပြဿဒါးပဲ။
(9) I'm not fussed!
(10) It's the death of me!
(11) You've got me there!
(အရှုံးပေးပါတယ်။You have me there!သို့မဟုတ် Search me! လို့လည်းပြောနိုင်)
(12) There's no holding her!
(13) She's nobody's fool!
သူမက ရှစ်စပ်က ဂျင်ဂျင်လည်ပဲ။
(14) Don't fool around!
(15) No fool like an old fool!
ကြီးခါမှ မိုက်ရင် မိုက်တွင်းပိုနက်တယ်။ ။
12/10/2013 09:01:00 AM learn-english
( Daily English Expressions -87 )
ဒီနေ့လည်း ..နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားတွေ ထဲက Look
on the bright side, Thanks but no thanks နဲ့ I’m
absolutely positive......တို့ကို ရွေးကောက် ဖော်ပြပေး
(1) Look on the bright side
အခြေအနေတစ်ခုကို အဆိုးမြင်နေတဲ့သူအတွက် အားပေးချ
င်တဲ့အခါ“အကောင်းဖက်က တွေးကြည့်ရင်..”လို့ ပြောတ
အင်္ဂလိပ်လိုတော့..................... Look on the bright
(a) It's so expensive living in Yangon.
Yes, but look on the bright side - you learn so
much more here than by studying from books.
ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အကောင်းဖက်က ကြည့်ရင်လည်း
ဒီမှာက စာတွေ့ထက်သာတဲ့ အရာတွေ အများကြီးလေ့လာ
(b) I've got four exams tomorrow!
မနက်ဖြန် စာမေးပွဲ လေးခုတောင် ဖြေရမှာ။
Ok, but look on the bright side - once you've
finished, you won't have any more exams for two
ဟုတ်လား။အကောင်းဘက်က ပြန်ကြည့်တော့လည်း ဖြေပြီး
သွားတော့လည်း နောက်နှစနှစ်လောက်အထိ စာမေးပွဲ ဖြေ
(2) Thanks but no thanks
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ရှောင်လွှဲချင်တဲ့အ
ခါ “ကျေးဇူးပါ ပဲ။ဒါပေမယ့် မ...တော့ပါဘူး”လို့ ပြောတတ်ြ
ကပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Thanks but no thanks
(a) We're going to the cinema. Do you want to
Thanks but no thanks. I've got something
(b) You could earn double by working in the city,
မြိူ့မှာ အလုပ်လုပ်ရင် ၀င်ငွေနှစ်ဆ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ..သိတ
With all the pollution, the crime, the stress.
ညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ မှုခင်းတွေ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့.... မလုပ်ေ
(3) I’m absolutely positive
အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို “လုံးဝ...သေချာတယ်” လို့ အင်္ဂ
လိပ်လို ပြောချင် ရင် I’m absolutely positive ကို သုံးပြေ
(a) Are you sure you had your keys with you
when you left home this morning?
ဒီမနက် အိမ်ကထွက်သွားတော့ မင်းဆီ သော့ပါသွားတာေ
I'm absolutely positive. I remember putting them
လုံးဝသေချာတယ်။ငါ..အိတ်ထဲ ထည့်လိုက်တာ မှတ်မိတယ်။
(b) I saw Lin Htet with Mi Gyaw - they were
လင်းထက်နဲ့ မိဂျော်တို့ လက်ချင်းတွဲနေကြတာ ငါတွေ့ခဲ့တ
Really? Are you sure it was Mi Gyaw?
I'm absolutely positive. She had that scarf she
11/21/2013 02:46:00 PM learn-english
ဒီနေ့တော့ ခွဲခွါခါနီးနှုတ်ဆက်ရာမှာ သုံးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား
အတိုလေးတွေကို .ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အနီးစပ်ဆုံး အ
သံထွက်လေးတွေကိုပါ ရေးပေး လိုက်ပါတယ်။
(1) Bye !
(ဗြိတိသျှလူမျိုးများ အသုံးများ။မိမိနှင့် သိသောသူ မည်သူ့ကိုမ
ဆို ဒီနှုတ်ဆက်စကားကို သုံးနိုင်။)
(2) Bye for now !
အခုတော့ သွားဦးမယ်။နောက်မှ ဆုံတာပေါ့။
(ခင်မင်ရင်းနှီးမှုပြ အရပ်သုံး စကား)
(3) Bye-bye !
(ကလေးအချင်းချင်း နှုတ်ဆက်စကား၊လူကြီးကလည်း ကေ
လးကို နှုတ်ဆက်နိုင်၊လူကြီးအချင်းချင်း ဘိုင်ဘိုင် သုံးပါက
(4) See ya !/ See you!
(5) So long !
(တော်တော်ကြာကြာ မတွေ့နိုင်တော့တဲ့အခါ သုံး။သိပ်အ
သုံး မများသော . နှုတ်ဆက်စကားဖြစ်။)
(6) Ciao !
(အီတလီစကားမှ ဆင်းသက်လာသော စကား။ဒီစကားနဲ့န
ှုတ်ဆက်ရင်.. .ခေတ်ဆန်မှု၊စတိုင်ကျမှုကို ဖော်ပြသည်ဟုဆြို
(7) Later !
(ခင်မင်မှု အရပ်သုံးစကား။အမျိုးသားများ အသုံးများ။Later
နောက်မှာ "man", "bro", "dude", or "dear".ထည့်ဖြည့်ပြီး
ပြောတတ်ကြ။ ဥပမာ. .Later,man! ကဲ..နောက်မှဆုံကြ
(8) Cheerio !
(ေ၇ှးကျပေမယ့် အရပ်သုံးစကားဖြစ် တော်တော်လေးသုံးတ
(9) See you around !
( See you soon ! ဒါမှမဟုတ် Be seeing you ! ဒါမှမဟု
တ် See you again !ဒါမှမဟုတ် See you later! လည်းသုံ
းနိုင်။..တစ်ကယ်လို့ ဖုန်းပြောပြီးလို့ နှုတ်ဆက်ရင်တော့
Talk to you later! ကို သုံးပါ။)
(10) Farewell !
(ချစ်သူနှစ်ဦး ထပ်မတွေ့ကြတော့ရင်.. ကြေကွဲစရာနှုတ်ဆ
က်တဲ့စကား အဖြစ်ပဲ အသုံးများ။)
(11) Ta-ra !
(12) I'm off !
ာ။ တစ်ကယ် လို့ I'm out! “တို့တော့သွားပြီ”ဆိုရင်တော့
လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေကို.. . နှုတ်ဆက်ပြီး ၀မ်းသာအားရြ
(13) Ta-ta for now !
(ကလေးတွေ နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ စကား၊လူကြီးကလည်း က
လေးကို နှုတ် ဆက်နိုင်။)
(14) Catch you later !
(ရင်းနှီးခင်မင်မှုပြ အရပ်သုံးစကားUS အသုံးများ။)
(15) Goodbye !